dimanche, 28 juin 2020 18:01
Miantsoarivo – Soavinandriana: Nipetraka naka aina dia nitambotsotra maty tampoka ilay rangahy
Teo Ampiadiambato Miantsoarivo no nitranga ity loza ity androany. Lehilahy iray avy any Bongolava any, no nipetrapetraka naka aina kinanjo nitambotsotra tampoka ary tsy niverina intsony ny ainy.
Efa eo ampanaovana fanadihadiana ny tompon'andraikitra ahalalana ny antony nitarika ho amin’izao fahafatesan’ity lehilahy ity izao.
dimanche, 28 juin 2020 17:45
Etazonia: Mihoatra ny 2,5 tapitrisa ny tranga Coronavirus
Ny sabotsy 27 jona no nihoatra ny 2,5 tapitrisa ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 any Etazonia araka ny fanisana nataon’ny oniversite Johns Hopkins. Tsy mbola voafehy anefa ity valanaretina ity, indrindra any amin’ny faritra atsimon’i Etazonia.
dimanche, 28 juin 2020 17:42
Malawi : Voafidy ho filoha i Lazarus Chakwera, lehiben’ny mpanohitra
Nahazo isam-bato 58,75% i Lazarus Chakwera, lehiben’ny mpanohitra any Malawi, hoy ny Vaomieran’ny fifidianana, tamin’ny fifidianana filoham-pirenena nifaninanany tamin’ny filoha amperinasa Peter Mutharika.
Fifidianana feno hosoka. Lavina ny fandresen’i Peter Mutharika tamin’ny latsa-bato natao tamin’ny 2019. Averina ny fifidianana filoham-pirenena. Izay no nambaran’ny Fitsarana avo any Malawi ny zoma 8 mey 2020.
dimanche, 28 juin 2020 14:59
Covid-19: Mijanona tsy miasa ireo mpiasam-panjakana marefo ara-pahasalamana
Namoaka naoty ny minisitry ny asa, ny fampananan'asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy fa mijanona tsy miasa amin'ny asa ireo mpiasam-panjakana marefo ara-pahasalamana, araka ny fanambaran'ny Filoham-pirenena tamin'ny 14 jona, mandritra ny hamehana ara-pahasalamana.
Ny mpitsabo ara-panjakana eo anivonny Ministera sy ny Andrimpanjakana ary ireo Foibem-pitondrandraharaham-panjakana ihany no afaka manome taratasy mazava ara-pahasalamana an'ireo mpiasam-panjakana voalaza fa marefo ara-pahasalamana.
Tsy misy resaka aloha hatreo ireo mpiasa marefo ara-pahasalamana miasa amin'ny orinasa tsy miankina.
« Aza mandrimandry mbôla managna aretina antsika, satrià mbôla miparitaka ny virus ».
Antitranterin’ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore io hafatra io, na tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, na tamin’izy nandray fitenenana nisolo tena ny CRCO Atsinanana tamin’ny fotoam-panombohana ny asa famendrahana, na campagne de désinfection amin’ny alàlan’ny fanafody VIROKIL.
dimanche, 28 juin 2020 08:57
Finoana Katolika: Manana rafitra manaja antanan-tohatra sady mizara andraikitra ifotony
Ny Katolika na ny EKAR - Eglizy Katolika Apostolika Romanina - dia misy ireo Kristianina Laika vita batemy, misy ireo Relijiozy, frera, masera ary mopera.
Ny Fiangonana dia manana rafitra, ny Paroasy, na ilay fiangonana hitatsika eny amin'ny fiaraha-monina isam-pokontany ireny.
Misy ny Diosezy, izay mifandraika mitovitovy amin'ny Région eto amin'ny Firenena, ary misy ny foibe any Vatican.
Ny Diosezy dia mety misy Distrika maromaro ao anatiny.
Ary resaka fandaminana dia misy ny archiDiocèse izay mandravona Diosezy maromaro, ka misy ny Archidiocèse 5 izay mamondrona ireo Diosezy 22 eto Madagasikara, Archidiocèse Antsiranana, Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara.
Covid-19: Ho vahinin'ny TVM ny Lehiben'ny Governemanta Ntsay Christian
Ho vahinin'ny TVM ny Lehiben'ny Governemanta Ntsay Christian anio alahady 28 jona 2020 amin'ny 8ora alina.
dimanche, 28 juin 2020 08:44
Covid-19: Mitohy 15 andro ny « Fahamehana ara-pahasalamana »
Taorian'ny fakan-kevitra nataon'ny Praiminisitra lehiben'ny Governemanta, araka ny fahefana nomen'ny Filoham-pirenena azy, tamin'ireo filohana Andrimpanjakana 3: ny Antenimieram-pirenena, ny Antenimierandoholona, ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, dia nandray didim-panjakana ny Filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina, teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra, fa tohizana ary mihatra avy hatrany, manomboka ny 27 jona 2020, eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana » (état d’urgence sanitaire) mandritra ny 15 andro noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana.